रुख ढलेकोमा गुल्मी कांग्रेसकी नेतृ सापकोटालाई पीडा ! – ebaglung.com
रुख ढलेकोमा गुल्मी कांग्रेसकी नेतृ सापकोटालाई पीडा !
२०७५ श्रावण १५, मंगलवार १०:१९	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७५ साउन १५ । गुल्मीको सदरमुकाममा ऐतिहाँसिक लाँकुरीको रुख एउटा ढलेको छ भने अर्को ढलाईएको छ । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनका क्रमममा नेपाली कांग्रेसका शम्शेरबहादुर खत्रीको अमरपुरमा टाउँको काटेर त्यस लाँकुरीमञ्चमा ल्याई प्रदर्शन गरिएको थियो । अहिले धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख शिबबहादुर खत्रीका पिता थिए उनी ।
पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो घर धुर्कोट रजस्थल हुँदै अमरपुर पुगेका खत्रीलाई २०१८ सालमा सदरमुकामबाट तत्कालीन हवल्दार रेलबहादुर थापा मगरको नेतृत्वमा पुगेको प्रहरीले गर्धनमा काटेर टाउँको ल्याएर तम्घास लिएर आएको थियो ।
तत्कालीन बडाहाकिम चन्द्रमान थाकालीको निर्देशनमा शहिद शम्शेरबहादुर थकालीको टाउँको टुप्पी समातेर त्यस लाँकुरी मञ्चमा सारा मानिसहरु भेला गराई अब देखि पञ्चायत विरुद्ध आवाज उठाउनेहरुको हालत यस्तै हुनेछ भन्दै प्रर्दशन गरिएको थियो ।
यस जिल्लामा २००७ साल देखि भएका कुनै पनि राजनैतिक दलका आन्दोलनको उद्घोष गर्ने र विसर्जन गर्ने थलो लाँकुरी मञ्च नै रहँदै आएको छ । उक्त रुखलाई गुल्मीको राजनैतिक ईतिहासका रुपमा लिईन्छ । सरकारी कार्यालयले गर्ने कार्यक्रम पनि त्यहीबाटै गरिदै आएको छ ।
उक्त रुख ढलेर शोभा हराएको भन्दै नेपाली कांग्रेस गुल्मी जिल्ला पार्टी सचिव विष्णुकुमारी सापकोटाले फेसबुक मार्फत पीडाबोध गरेकी छन । उनले स्टाटसमा यस्तो लेखेकी छन–‘ राणा शासन, पञ्चायती ब्यवस्था, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र सम्मको आन्दोलनमा आवाज बुलन्द गर्ने सुन्दर थलो उजाड भएको छ । ’
उनले तम्घासको सितल छहारी र गहना त्यसरी उजाड हुँदा मनमा पीडा भएको कुरा ब्यक्त गरेकी छन । त्यस लाँकुरी मञ्चलाई रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर ८ का वडाध्यक्ष भरत भलामीले त्यस ऐतिहासिक मञ्चमा एउटा सुन्दरपार्क निर्माण गर्ने बचन दिएको प्रति सन्तोष ब्यक्त गरेकी छन ।
केहि दिन अघि त्यस लाँकुरी मञ्चको एउटा रुख आफै ढले पछि अर्को रुखको पनि जरा सडेर जोखिम हुन सक्ने भन्दै हालै ढलाईएको छ । तम्घासका ८० वर्षिया समाज सेवी रुद्रबहादुर भुजेल भन्छन–‘ लाँकुरी मञ्च धेरै पुरानो तम्घास कै मुटु मान्दै आएका छौं । जहाँ तत्कालीन बडाहाकिम चन्द्रमान थाकालीले शम्शेरबहादुर टाउँको टुप्पीमा समातेर सवैलाई त्रसाएका थिए । ’
अर्का पुराना समाज सेवी नन्दराम भुसालले पनि आफु सानै छँदा शम्शेरबहादुरको टाउँको प्रदर्शन गरेर हामी त्यति वेलाका वालवालिकाहरुलाई समेत डराउने गरेका थिए ।
नरेन्द्रको स्वास्थ्यमा सुधार, रकम अभावले परिवारमा चिन्ता, जापानमा ४ लाख ५० हजार संकलन !
ताराखोलामा ट्याक्टर दुर्घटना हुदा एक बालकको मृत्यु